यी हुन् बुधबार नेप्सेमा सबैभन्दा धेरै कारोबार गर्ने ५ कम्पनी ? - नेपालबहस
यी हुन् बुधबार नेप्सेमा सबैभन्दा धेरै कारोबार गर्ने ५ कम्पनी ?
| १६:५३:४२ मा प्रकाशित
७ माघ, काडमाडौं । आज बुधलबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा यी पाँच कम्पनीले सर्वाधिक कारोबार गरेका छन् । मंगलबार नेप्सेमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको सर्वाधिक कारोबार भएको हो ।
त्यस्तै, प्रभु बैंक, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, शिखर इन्स्योरेन्स र एनआईसी एशिया बैंकले सर्वाधिक कारोबार गरेका हुन् । आज नेप्से परिसूचक २ हजार ३४२ दशमलव ७६ विन्दुमा कायम भएको छ । कारोबारमा १२ ओटा समूहमध्ये पाँच ओटा समूहको परिसूचक घटेको छ भने ७ समूहको परिसूचक बढेको छ ।
बुधवारको बजारमा होटल समूहका लगानीकर्ताहरुले सर्वाधिक गुमाएका छन् भने जीवन बीमा समूहका लगानीकर्ताहरुले सर्वाधिक कमाएका छन् । होटल समूहको परिसूचक सर्वाधिक १ दशमलव १२ प्रतिशत घटेको छ भने जीवन बीमा समूहको परिसूचक सर्वाधिक ४ दशमलव ६७ प्रतिशत बढेको छ ।
यो दिन बैंकिङकको परिसूचक शून्य दशमलव १४ प्रतिशत, व्यापारिकको शून्य दशमलव ३ प्रीतशत, उत्पादन तथा प्रशोधनको १ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत र अन्य समूहको शून्य दशमलव ६४ प्रतिशत घटेको छ ।
यस दिन वित्त समूहको ४ दशमलव २६ प्रतिशत, जलविद्युुतको ३ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत, निर्जीवन बीमाको १ दशमलव ७३ प्रतिशत, लघुवित्तको शून्य दशमलव ७६ प्रतिशत, म्यचुअल फण्डको शून्य दशमलव १३ प्रतिशत र विकास बैंकको शून्य दशमलव शून्य ८ प्रतिशत परिसूचक बढेको हो । बुधवार ६ अर्ब २१ करोड ९ लाख ६६ हजार बराबरको १ करोड ५९ लाख ८१ हजार ९५२ कित्ता शेयर कारोबार भएको छ ।
कुन कम्पनीको कारोबार कति ?
बुधवार नेपाल लाइफको इन्स्योरेन्सको सर्वाधिक कारोबार भएको हो । कम्पनीको ६१ करोड १४ लाख ८ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । आज कम्पनीको शेयरमूल्य पनि ७ दशमलव २९ प्रतिशतले बढेको छ । प्रतिकित्ता १९६ ले बढेर नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको अन्तिम शेयरमूल्य २ हजार ८८५ पुगेको छ ।
त्यस्तै, प्रभु बैंकको २९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेपाल पुनर्बीमाको २७ करोड ३६ लाख, शिखर एन्स्योरेन्सको २९ करोड १९ लाख, एनआईसी एशिया बैकको १८ करोड २८ लाख बढिको शेयर कारोबार भएको छ ।
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको शेयर कारोबार रोक्का, यस्तो छ कारण ? ४६ मिनेट पहिले
नेप्सेमा तीन वाणिज्य बैंकसहित चार कम्पनीको बोनस शेयर सूचीकृत, कुनको कति ? ३ दिन पहिले
प्रभु बैंकले जुम्लामा खोल्यो २१३ औं शाखा ६ दिन पहिले
नेप्सेमा सात कम्पनीको १ करोड २० लाख कित्ता शेयर सूचीकृत, कुनको कति कित्ता ? १ हप्ता पहिले
प्रभु बैंकद्वारा भानुभक्त मा.बि. सिन्धुलीलाई कम्प्युटर प्रदान १ हप्ता पहिले
प्रचण्डसँग सूचना चुहाएको आरोपमा गृहमन्त्रीले स्वकीय अधिकृतलाई हटाए २ मिनेट पहिले
शुरु भयो सेतो मच्छिन्द्रनाथको पुनर्निर्माण ६ मिनेट पहिले
साइबर ब्युरोको नक्कली फेसबुक पेज बनाउने पक्राउ ७ मिनेट पहिले
कृषकका लागि राष्ट्रिय समस्या बन्दै बाँदर १० मिनेट पहिले
अखिल नेपाल शिक्षक संगठन रुपन्देहीको जिल्ला सम्मेलन सम्पन्न, केन्द्रीय अध्यक्ष पाठकसहित ६ शिक्षक सम्मानित १४ मिनेट पहिले
सोमबारदेखि केरुङ नाका पुनःसञ्चालन हुने २ घण्टा पहिले
चन्द्रागिरी हिल्सको शेयरमूल्य ९.८१५ बढ्यो, खरीद चाप उच्च २ घण्टा पहिले
दिपक लिम्वुको बाटो काटिएला युट्युवमा रिलिज ५ घण्टा पहिले
राज्यले सहजीकरण गरेमा निजी क्षेत्रमार्फत द्रूत आर्थिक विकास सम्भव छ: वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकाल ४ घण्टा पहिले
सेनाले सञ्चालन गरेको शिविरमा ५८२ जनाको स्वास्थ्य उपचार ५ घण्टा पहिले
गलेश्वरको शिवालय मन्दिरको छाना फेरिने ५ घण्टा पहिले
वसन्तलाई स्वागत गर्ने ‘चैतलो’ पर्व हुम्लामा मनाइयो ३ दिन पहिले
गतिराेध अन्त्यका लागि नेकपाको औपचारिक विभाजन आवश्यक ३ दिन पहिले
‘राधा क्यान्सर सचेतना पुरस्कार’ बाट पत्रकार केसी सम्मानित ६ दिन पहिले
लोकतन्त्र समाप्त पार्न ओलीले चुनावको घोषणा गरे : श्रेष्ठ ३ हप्ता पहिले
राप्ती नदीमा ७० गोही छाडियो ३ हप्ता पहिले
झापामा पुरुषमाथि अप्राकृतिक करणी, प्रहरीद्धारा आरोपीलाई उन्मुक्ति २ हप्ता पहिले
रावाबेँसी गाउँपालिकामा बर्थिङ सेन्टरको स्थापना २ हप्ता पहिले
मुम्बईमा अमिताभ र अजय ‘मे डे’मा सँगै १ हप्ता पहिले
देउवा संवैधनिक परिषद् बैठकमा सहभागी नहुने २ महिना पहिले
नेपालमा चरणबद्ध प्रदर्शन भएपछि भारतले मुख खोल्यो : “नेपालसँगको सीमा नक्शामा कुनै परिवर्तन गरेका छैनौं” १ वर्ष पहिले
बुद्धको शिक्षा बालुवाटारको भीडलाई आवश्यक : राप्रपाका अध्यक्ष राणा १० महिना पहिले
नेपाली बनेर भारतीयद्धारा दुई अर्ब ३९ करोडको राजश्व छली ५ महिना पहिले